Ukujongwa kokufumana umlinganiso jikelele kwiimarike zaseWalrasian
Umthengisi wase-Walrasian ungumthengisi-mthengisi olinganisa nabathengi kunye nabacebi ukuba bafumane ixabiso elilodwa lokuncintisana ngokufanelekileyo. Omnye ucinga umenzi-mthengisi onjalo xa ebonisa imarike njengexabiso elilodwa apho onke amaqela angakwazi ukurhweba.
Umsebenzi weLéon Waltras
Ukuqonda umsebenzi kunye nokufaneleka komthengisi wase-Walrasian ekufundweni kwezoqoqosho , omnye kufuneka aqale aqonde umongo apho i-auctionerer i-Walrasian ivela khona: intengiso yase-Walrasian .
Ingcamango ye-auction yase-Walrasian yokuqala yabonakala njengeyilo loqoqosho lwezeMathematika uLebon Walras. UWalras udlalwa kwintsimi yezoqoqosho ekuqulunqweni kwayo kwinqanaba elincinane lexabiso kunye nophuhliso lwe-theory of equilibrium.
Kwakuyimpendulo kwingxaki ethile ekugqibeleni ikhokelela uWalras kumsebenzi owawuza kuba yinkcazo yelungelelwano jikelele kunye nombono wendyesi yase-Walrasian okanye imarike. UWalras uzimisele ukuxazulula ingxaki ekuqaleni eyaboniswa ngumfilosofi waseFransi kunye nesazi semathematika uAntoine Augustin Cournot. Ingxaki kukuba ngelixa kungeniswa ukuba amaxabiso aya kulingana nokubonelela kunye neemfuno kwiimarike ezizimeleyo, awakuboniswa ukuba loo mlingano ikhona kuzo zonke iimarike ngexesha elinye (i-state enye eyaziwa ngokuba ngumlinganiso jikelele).
Ngomsebenzi wakhe, ekugqibeleni uWalras wavelisa inkqubo ye-equation equation ekugqibeleni eyanikezela ingcamango yendendesi yaseWalrasian.
I-Walrasian Auctions kunye nabaThengisi
Njengoko kwaziswa uLéon Walas, i-aucrasa yase-Walrasian yintengiso yeevenkile zangexesha elifanayo apho i-arhente nganye yezoqoqosho okanye umlingisi ubala ixabiso lemfuno kuyo yonke into enokuqiqa kwaye iveza le ngcaciso kumthengisi. Ngolu lwazi, umthengisi wase-Walrasian usetha intengo yezinto ezilungileyo ukuqinisekisa ukuba ukubonelela kufana nexabiso elipheleleyo kubo bonke abameli.
Ukubonelelwa ngokufanelekileyo kunye neemfuno ziyaziwa njenge-equilibrium, okanye umlinganiso jikelele xa urhulumente ukhona jikelele kunye nakuzo zonke iimarike, kungekhona nje imarike yezinto ezilungileyo kumbuzo.
Ngaloo ndlela, umthengisi wase-Walrasian ngumntu oqhuba intengiso ye-Walrasian enokufanisa ngokufanelekileyo ukuba ukubonelela kunye nemfuno esekelwe kwiibhidi ezinikezelwa ngabameli bezoqoqosho. Lo mnonisi unika inkqubo yokufumana amathuba okurhweba apheleleyo kunye neendleko ezingabikho kwiintengiso. Ngokwahlukileyo, ngaphandle kwesenzo se-Walrasian, kunokubekho "ingxaki yokukhangela" apho kukho indleko yokugcina indawo yokufumana iqabane ekuthengiseni kunye nokuthengiswa okongeziweyo xa umntu edibana nomlingane onjalo. A
Enye yemigaqo ephambili yintengiso ye-Walrasian yinto yokuba isithengisi sayo isebenza ngaphakathi kwimeko yolwazi olupheleleyo kunye olupheleleyo. Ubukho beenkcukacha ezibini ezigqibeleleyo kwaye akukho zindleko zokuthengiselana ekugqibeleni zivelisa imbono kaWalras yokukhangela okanye inkqubo yokuchonga ixabiso lokuthengiswa kwemarike yazo zonke iimpahla ukukhusela umlinganiso jikelele.
Yiyiphi Imida Enamandla?
Imali eNgeniso yeMyinge kunye neNkcitho yoLuntu lweNdleko Umbuzo
IYunivesithi yaseWisconsin-Whitewater Admissions
Inqununu !: 5 Amazwi Angenakuthetha Ngento Ocinga Ngayo Kuthethayo